Osisi Cultivation Erimeri Na-ekpochapu Dome Heating kit China Manufacturer
Home > Ngwaahịa > Ulo Okpokoro Ugbo > Mkpụrụ Okpomọkụ Ọkụ > Osisi Cultivation Erimeri Na-ekpochapu Dome Heating kit
Nwee mmalite mmalite gị na seedlind ma belata ubi gị n'oge oyi a site na iji ngwa eletriki ọkụ eletrik . A na -ahaziri ya nke ọma maka ịzụlite mkpụrụ n'ime ụlọ. Clear plastic dome enyere mfe ịhụ na uto nke seedlings. 2 nkedo oghere na dome doro anya na-enyere seedling's respiratory metabolism. Okwesiri ịzụlite okooko osisi, mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri n'oge ọ bụla, ọ bụla, ọbụlagodi na n'oge oyi. Ụlọ plastik (a na - eme ka isi ya bụrụ nke ABS; a na - eme Pome nke PET n'ụzọ doro anya, a na - etinye PSY nke nkedo)